नयाँ आर्थिक वर्षमा ६ सय ६१ मेगावाट विद्युत राष्ट्रिय प्रणालीमा थपिने - UrjaKhabar Urja Khabar - Nepal's No. 1 energy based online portal.
जेठ ०१, २०७५ 5062 ऊर्जा खबर /काठमाडौं
आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा केन्द्रीय प्रसारण प्रणालीमा ६६१.४५ मेगावाट विद्युत थपिने भएको छ । निर्माणको अन्तिम चरणमा रहेको राष्ट्रिय गौरवको माथिल्लो तामाकोसीसहित १२ जलविद्युत आयोजनाको विद्युत प्रणालीमा थपिने भएको हो ।
४ सय ५६ मेगावाटको माथिल्लो तामाकोसी, ४० मेगावाटको खानीखोला-१, २७ मेगावाटको दोर्दीखोला, २३.५ मेगावाटको सोलुखोला र २२.२ मेगावाटको माथिल्लो चाकुले नयाँ आवबाट विद्युत उत्पादन सुरु गर्न लागेको नेपाल विद्युत प्राधिकरणका प्रवक्ता प्रबल अधिकारीले बताए । उनका अनुसार २५ मेगावाटको दोर्दी ‘ए’ , २२ मेगावाटको बागमती, १८ मेगावाटको माथिल्लो सोलु र १४.८ मेगावाटको माथिल्लो सान्जेनको विद्युत पनि प्रणालीमा जोडिने छ ।
यस्तै, ६.४२ मेगावाटको माथिल्लो मैलुङ ‘ए’, ३.३३ मेगावाटको कापडीगाड र ३.२ मेगावाटको गेलुङखोलाको विद्युत प्रसारण प्रणालीमा जोड्ने प्राधिकरणको लक्ष्य छ । सबै आयोजनाको विद्युत प्रणालीमा थपिएपछि आयातित विद्युतको परिणाम घटाएर आन्तरिक उत्पादनबाट माग व्यवस्थापन गर्न सम्भव हुने प्राधिकरणको दाबी छ ।
२ महिनामा ७ आयोजना आउँदै
निर्माण पूरा भएर परीक्षणको चरणमा पुगेका ७ आयोजना चालु आवभित्र आउँदै छन् । ९४.८ मेगावाटका यी आयोजना असार मसान्तभित्र प्रणालीमा जोड्ने लक्ष्य रहेको अधिकारीले बताए ।
१.५ मेगावाटको ठेउलेखोला, ८ मेगावाटको माथिल्लो नौगाड, ८.८ मेगावाटको रुदीखोला ‘ए’, ९.९ मेगावाटको इवा खोला, २५ मेगावाटको काबेली बी-१, २२ मेगावाटको तल्लो हेवा र २० मेगावाटको तल्लो मोदी २ महिनाभित्र पूरा हुने प्राधिकरणले जनाएको छ ।
सबै आयोजना चालु आवमा आउन सम्भव नभएमा नयाँ आवमा धकेलिने उनको भनाई छ । चालु आवको १० महिनामा १२ जलविद्युत आयोजनाको ७० मेगावाट विद्युत प्रणालीमा जोडिएको छ ।